ညီလင်းသစ်: ကျနော်နှင့် ညီလင်းသစ်
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.4.11
ဒီပိုစ့် တည်ဆောက်ပုံ အိုင်ဒီယာက တကယ် အိပ်ချင်မူးတူး အိပ်ရာထခါစမှာ ရတာလား။ မျက်လုံးထဲကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပေါ်အောင်ရေးနိုင်တယ်။ သွားတိုက်ရင်းနဲ့ပြောတော့ အာလုတ်သံကြီးပါနေမှာပေါ့နှော်။ :)
စောစောကတည်းက ပုံမှန်လာဖတ်နေကျ အမ လေး ကို စာရင်းထည့်ထားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ... နောက်ပြီး ကွန်မန့်တွေပြန်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
tag post ကို အဲလိုမျိုးလေး ရေးတာကြိုက်သဗျ..
အရင်က tag post တွေဆိုရင် မူလတန်းဖတ်စာအုပ်ဖတ်ရသလိုပဲ..
ကျမ၏ကြောင်လေးအမည်မှာ ပူစီ ဟုခေါ်ပါသည်။
....အဲလို ရေးတာတွေဖတ်ဖတ်နေရတာ တော်တော်စိတ်ကုန်တာ..ကျနော် ၂၀၁၂ tag တာ ကို သရော်လိုက်တာ..ကျနော့ ဘလော့မှာ ဆဲသံတွေ ပွက်ပွက်ညံသွားတာပဲ..
စာအရေးအသားကလဲကောင်း အတွေးကလဲကောင်း ဆိုတော့ ဖတ်ရတာမြောသွားတယ်ကိုညီလင်းသစ်။
ညာခွဲ ကိုညီလင်းသစ်လည်း Blog ရေးတော့မယ်နဲ့ တူတယ် :)
Pls keep on writing. We like most of your post.
အစ်ကို ကြာနေတာ သေချာ အချိန်ပေးရေးနေတာကြောင့်ကိုးး) တော်တော် ဖတ်လို့ကောင်းတယ် အိုင်ဒီယာလေးလည်းကြိုက်တယ် ။
ချစ်သော မျက်စိနဲ့ ကြည့်လို့ပဲဖြစ်မှာပါ ဘာရေးရေးဖတ်ကောင်းနေတယ် ဆိုတာ ။ ကျနော် အစ်ကို့ဘလော့မှာ သဘောကျတာလေးက ရီပလိုင်းပြန်တာလေး ကိုကြိုက်တယ် ပို့စ်ဟောင်းတွေကို ငါပေးထားတဲ့ ကော့မန့်ကို အစ်ကို ဘာများပြန်ဖြေထားသလဲဆိုပြီးတော့လည်း ပြန်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ် ကိုယ်လည်း ကော့မန့်တွေကိုပြန်မှပဲလေလို့ စိတ်ထဲရှိပေမယ့် ပျင်းတာနဲ့ပဲ မပြန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒီဘလော့မှာ ဘလော့ဂိုစပီးယားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ချစ်စရာပို့စ်လေးတွေနဲ့ သားအကြောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် နောက်လည်းများများရေးပါအုံး အချစ်အကြောင်းတွေတော့ ဖတ်ရခဲတယ်ကော why ? :P
ရေးပေးတာကျေးဇူးပါ အစ်ကို ဒါနဲ့ ရှေရီ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆရာမဂျူး ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်ထဲမှာ အဲ့တာလေးဖတ်ဖူးသလိုပဲ ။
ရှေရီ= မောင် (သို့) ယောက်ျား (သို့) အချစ် :)
တစ်ပုဒ်လုံးဖတ်လိုက်တာ စကားတစ်လုံးဘဲ စွဲပြီးကျန်ခဲ့တယ်.. ဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်လို့ သိချင်မိသွားလို့လေ။ မောင်မျိုးပြောတဲ့ ရှေရီ ဆိုတာလေးပေါ့။ ခေါ်လို့ကောင်းသလို နားထောင်လို့လည်း ကောင်းမဲ့ အသံမျိုးလေးဘဲနော်
အင်တာဗျူးပုံစံကတော့ သိပ်လှတယ်. သမရိုးကျ ရေးဟန်ကနေ ဖောက်ထွက်လိုက်တဲ့ စတိုင်ဘဲ
ဒါကြောင့်လည်း မအိမ်သူက ရှေရီလို့ အမြတ်တနိုးခေါ်တာ ဖြစ်မယ်း)
ကိုညီလင်းသစ်တောင် အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်နေပြီကိုး.. (ဒီထဲက ကောက်နုတ်ချက်.. :D).. ဒါနဲ့ ဘလော့ခ်နဲ့မဆိုင်တာ စပ်စုဦးမယ်.. မအိမ်သူက မြန်မာလူမျိုးလား.. ဟိုနေ့က ကလေးလေးက ဘိုရုပ်လေးမို့... အဟဲ... (နေ၀ဿန်က စပ်စုသန်တယ်. အစ်ကိုရေ..)
အိုင်ဒီယာလေးကတော့ တော်တော်လန်းတာပဲ။ ဗျူးဆိုတဲ့ တက်ဂ် ကို ရေးနေတာကိုပဲ သူမတူအောင် ရေးတက်တယ်။
ဗျူးလေးကို သူများမတူပဲ ထူးထူးခြားခြားလေး တင်ပြသွားတဲ့ အကိုရေ တော်လိုက်တာနော်..
တော်သေးတယ် မမအိမ်သူ ဝင်လာလို့ အဟီး..:D
မနက် အိပ်ရာမထခင်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့တာ...။ ခုမှ ပြန်လာဖတ် မန့်ရတယ်...:) အတွေးဆန်းကလေးနဲ့ ဗျူးပါပဲ၊ တခုပဲ လိုတယ် ကိုညီလင်းသစ်နဲ့ မအိမ်သူ အကြောင်း....
ရွာမှာဆို အဲသလို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဗျူးတွေက ပို Juicy ဖြစ်တာကလား....(အချွန်နှင့် မ သွား၏)
ဟင့်အင်း..အိပ်ရာ ဝင်ခါနီးမှာ ရတာ၊ အာလုတ်သံတင် ဘယ်ကမလဲ၊ ပါးစပ်မှာလည်း သွားတိုက်ဆေးတွေ ပေကျံလို့..၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ဒါဆိုလည်း ဝမ်းမြောက်ရကြောင်းပါဗျား၊း)
သွားလိုက်တော့.. နင်သွားလိုက်တော့... အာ... ရှုပ်ကုန် ပြီဗျာ၊ ကိုကြီးကျောက်လည်း ၂၀၁၂ tag ကို ဝေဖန်လို့ ကမ္ဘာမပျက်ခင် ဘလော့ဂ်ပါ ပျက်မယ့်ကိန်း ထင်တယ်၊း) ဒီတဂ်ပို့စ်ကလည်း အခုလိုရေးဖို့ ရေးကွက်လေး လည်း ရှိနေလို့ပါဗျာ၊ မဟုတ်ရင်တော့လည်း မူလ format အတိုင်းပေါ့...၊း)
အင်း.. အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်သာလျှင် မူလပထမ အစစ်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း တရားစွဲရမှာပဲ...၊း)
thank you for your encouragement..!
အသက်ကြီးလာတော့ အချစ်အကြောင်းပြောရမှာ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ၊ ဒါပေမယ့် လာမှာပါ..အဟဲ၊ ရှေရီက ညီဖြေထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျာ...၊း)
ကျေးဇူးပါဗျို့...၊ အင်း, ရှေရီကတော့ သူသူငါငါ ရေလဲ သုံးတဲ့ စကားပါပဲလေ၊ ကြိုက်သလိုသာ မြန်မာမှု ပြုပါ တော့...၊း)
တကယ်တော့ ၃၆ တောင် ကျော်ပြီဗျ..၊း) မအိမ်သူက ဆွစ်လူမျိုးပါ၊
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကျနော် ရေးတတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီတဂ်လေးကိုက ဒီလိုရေးဖို့ ရေးကွက်လေး ရှိနေလို့ပါ၊
စခုပ်စတား....၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တာပလု အားကြီး လော..း)
ဟုတ်တယ် ညီမရေ၊ သူကတော့ ကျနော် အခန်းပျက် သွားပြီလို့ ထင်မှာပဲ...။း)
Mon chéri ဆိုတာ ချောကလက် နာမည်လေ :P
ဟုတ်ကဲ့..၊ မောင်မျိုးကလည်း အဲဒီ အကြောင်းကိုပဲ ရေးဖို့ ဖိအားပေးနေတယ်ဗျ၊း) ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း နဲနဲချင်းတော့ စရေးနေပါပြီ၊ အချွန်တွေက မြိနေတဲ့အခါ တခါတလေ ထိုးလို့ထိုးမှန်း မသိဘူးဗျ...၊း)
ဟုတ်တယ်၊ သင်းပျံ့ချိုအီတယ်ပေါ့၊ meine liebling လည်း ကောင်းတာပဲ..အဟဲ၊
အိုင်ဒီယာလန်းတယ် ညီလင်းသစ် ဘယ်ခွဲလား
တော်သေးတယ် ညာပေါင်းမဖြစ်တာ ဟဟား
ဆိုတာလေး သဘောကျမိတယ်။ မအိမ်သူက ဟန်နီလို့
ခေါ်တာနေမှာပေါ့ ပြောကြည့်တာ. မှတ်မှတ်ရရ Macro photography ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကနေ စပြီးဖတ်လာတာ ပထမတော့ ပန်းတွေလှလို့ဝင်လာတာပါ။ နောက်တော့ သားလေးရဲ့ ပေပွနေတဲ့ ပုံလေးကို မြင်ပြီး အမြဲလာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဘလောဂ့်ကို အရင်က လာဖြစ်တာက ပုံတွေကြည့်ချင်လို့ နောက်မှ စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာကလည်းတမျိုး ဖတ်လို့ ကောင်းနေပြန်တယ်
ညာခွဲကုိုညီလင်းသစ်ကနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ခွဲကုိုညီလင်းသစ်ကုို အရှုံးပေးသွားရပုံဘဲ။ ဒီတော့လည်းအိပ်ရေးတွေဆက်ပျက်နေဦးမှာပေါ့။
အဖြေမှန်ကို ညီသိပြီ ဟဟား
ရှေရီ = အချစ် တဲ့ ကျနော့်အစ်ကိုပြောပြတာ ကြည်နူးစရာလေးဗျာ အူတွေတောင်ယားတယ် ဟိဟိ ။
ဗျ...၊ကျွန်တော်လည်း ပို့စ်တွေကို အဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေး
Macro photography ကတည်းက လာလည်ဖူးတာကိုး၊ နဲနဲတောင် ကြာနေပြီပဲ၊ အဲဒါကြောင့် မိတ်ဟောင်း၊ ကျွမ်းဟောင်းလိုပါပဲလို့ အောက်မေ့နေတာ...၊း)
အစစ်ပဲဗျာ၊ အကယ်၍ ညာခွဲကသာ ဘယ်ခွဲကို convince လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကျနော်လည်း ရှေ့လျှောက် အိပ်ရေးဝဖို့ပဲဗျ...၊ အခုတော့...၊း(
ဟား..ဟား..ဟား၊ ညီ့ဆီမှာ အဲဒီလို ပွင့်လင်းတာလေး တွေက သဘောကျဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ..၊းD
ဒါကလည်း ရမ်းသမ်းမှန်းသမ်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာပါဗျာ၊ အထွေအထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊း)
ပို့စ်မပြောနဲ့ ကော်မန့်တွေနဲ့တင် အရမ်းကို ပြည့်စုံနေတာပါလား။
အလုပ်ရယ်၊ သားလေးတစ်ယောက်ရယ်ရှိတာရယ်၊ ဘလော့ဂ်ရေးတာရယ် (အမှန်က အခြားအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်) စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်ဘူးဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။
သွားတိုက်ရင်းစကားများများပြောတတ်တာလည်း ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပဲနော်။း)
ဘလော့ဂ်တွေမှာတော့ ကိုယ့်အကြောင်း၊ သူ့အကြောင်း တွေက သိနေမှာပါပဲဗျာ၊ သွားတိုက်ရင်း စကားပြောခြင်း ဟာလည်း တကယ်တော့ အတတ်ပညာတခုဗျ..၊း)
မှန်ရှေ့မှာရပ်ရင်း မှန်ထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ စကားပြောတဲ့ ပိုစ့်မျိုး ရေးကြည့်ဖူးတယ်... ရေးပြီးမှ အားမရတာနဲ့ မတင်ဖြစ်တော့ဘူး...
အခု ကိုညီလင်းရေးသွားတာ သပ်ရပ်လိုက်တာ... ပြီးတော့ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာလေးတွေလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါနေတယ်...
ဒါကြောင့် ဒီပိုစ့်လေးကို ကြိုက်တယ်...း))
ကြိုက်တာလေးတွေလည်း ရေးအုံးနော်...း))
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ မသက်ဝေက အားမရဘူးဆိုပေမယ့် ကောင်းမှာပါ၊ ဆင်ပိန်ကျွဲလောက်-ဆိုတဲ့ စကားပုံလေး သွားသတိရတယ်၊း) ရှိနေသေးရင် တင်ပါဦး...။
Lovely interview!Thanks for your time and imagination for polar bear.I've been at Montreux for two days.I pushed the lap top away and just enjoyed the beauty of nature:)
Montreux က အရမ်းလှတယ်၊ ကျနော်လည်း ကြိုက်တယ်၊ တခါတခါ ဘလော့ဂ်နဲ့ အဝေးမှာ အဲဒီလို သုံးလေးရက်လောက် သွားနေရတာလည်း ကောင်းတယ်..။